အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:သတင်းပဒေသာ	Comments are closed.
မောင်တူး - သက်ရှိပန်းချီ - အပိုင်း (၁၇)	HTC One M9 မိတ်ဆက်ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်	စောဝေ - အဖေတူသားများ	ကာတွန်း လိုင်လုဏ် - ကြိုဆိုနေသူတွေ	ကိုသန်းလွင် - ကျောင်းကောင်စီ	ဆောင်းလူ - အပြာကား	မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး သရုပ်ဆောင်သင်တန်းဖွင့်ပွဲ ပြုလုပ်	1MB ကို ၆ ကျပ် ပဲကောက်ခံမည့် အူရီဒူး ရဲ့ “ ဖလန်းဖလန်းအင်တာနက်”	ကာတွန်း လိုင်လုဏ် - မီးလင်းကုန်ပြီ	မောင်စိုးချိန် - ကျောင်းသားသပိတ် အရေးတော်ပုံ (၈)	မိုးမခ Kindel Store
လူမှုရှုခင်း ကောက်စာများဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာရောက် ရွှေည၀ါဆရာတော်တရားပွဲ ဖိတ်ကြားစာ ပြောရဦးမယ် . . . အဘစိန် ရေ (Kyaw Thu)
စာပဒေသာ ကောက်စာများThan Win Hlaing - မိုးမခ၏ ပင်တိုင်စာရေးဆရာ သန်းဝင်းလှိုင်၏ အာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ် စာအုပ်ထွက်မည် ပြည်ပရောက် မြန်မာအချို့၏ မျိုးပျောက်ဇာတ်လမ်း